बिज्ञान प्रविधि – Education Awareness
फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्स एपमा विश्वभर समस्या १ बैशाख २०७६, आईतवार २०:४८
काठमाडौं, १ वैशाख । चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्स एपमा समस्या आएको छ । आइतबार अपरान्ह नेपालसहित विश्वभरका प्रयोगकर्ताले ३ सामाजिक सञ्जालमा समस्या व्यहोरेका हुन् । फेसबुकसँग मातहतको इन्स्टाग्राम र ह्वाट्स एपमा आइतबार..
ब्ल्याकहोलबारे जान्नुपर्ने कुराहरु २८ चैत्र २०७५, बिहीबार २०:५७
काठमाडौं २८ चैत । वैज्ञानिकहरुले पहिलोपटक रहस्यमयी मानिएको ब्ल्याकहोलको तस्वीर लिएका छन् । प्रकाशलाई आफूभित्रै समाहित गर्ने ब्ल्याकहोलको तस्वीर लिनु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । द इभेन्ट होरिजन (ईएचटी)ले पहिलोपटक ब्ल्याकहोलको तस्वीर लिएको हो..
इन्टरनेटबाट एक बर्षमै एक अर्ब लुट ! २९ श्रावण २०७५, मंगलवार ०७:३४
काठमाडौं, २९ साउन । ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट एकै बर्षमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको पाईएको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ईन्टरनेट सेवाप्रदायकले नियमविपरित मर्मतसम्भारका नाममा उपभोक्ताबाट..
फेसबुक र इन्स्टामा कति समय बिताउने ? २८ श्रावण २०७५, सोमबार ०८:४७
काठमाडाैँ, २८ साउन । सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक गतिविधिको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा होस् अथवा कामकै बेला फेसबुक र इन्स्टाग्राममा झुन्डिनेको संख्या विश्वमै ठूलो छ । सबैलाई थाहा छ । यसले हाम्रो महत्वपूर्ण समय..
दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश ३२ असार २०७५, सोमबार २२:४१
काठमाडौँ, ३२ असार । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समितिले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिका संयोजक सूर्यबहादुर रावतले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर तथा मूल्य र..
सामसुङले विश्वकै ठूलो मोबाइल कारखाना भारतमा बनायो ३० असार २०७५, शनिबार १९:२६
एजेन्सी, ३० असार । विश्वको नम्बर १ सूचना प्रविधि कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले भारतमा दुनियाकै ठूलो मोबाइल उत्पादन कारखानाको स्थापना गरेको छ । सामसुङले उत्तर प्रदेशको नोएडामा उक्त प्लान्ट स्थापना गरेको हो । सामसुङको उक्त कारखानाको उत्घाटन..
नेपालमा इन्टरनेट प्रयोकर्ता : ३ लाखबाट एकैचोटि २० लाख २० असार २०७५, बुधबार १९:५४
काठमाडौँ, २० असार । नेपालमा इन्टरनेट प्रयोकर्ताको संख्या एकैपटक ३ लाखबाट २० लाख पुगेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने विभिन्न सेवाप्रदायकको मासिक जानकारी दिने तथ्यांक (एमआईएस) रिपोर्टमा गत चैतसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट..
विद्युत् सेवा नियमित नहुँदा सेवाग्रही मारमा
वीरगञ्ज, २० असार । विद्युत् सेवा नियमित नहुँदा यहाँका सेवाग्रही मारमा परेका छन् । प्रत्येक पाँचदेखि १० मिनेटमा विद्युत् जाने गरेको र भोल्टेज घटबढ हुनेगरेका कारण कम्प्युटर, ल्यापटप, बल्ब जस्ता उपकरणमा असरपर्ने गरेको तथा कतिपयको इन्र्भटरसमेत..
इन्टरनेट सेवा शुल्क कम गर्छौं – सञ्चार मन्त्री १२ असार २०७५, मंगलवार १९:२३
काठमाडाैँ, १२ असार । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा शुल्क अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा सस्तो रहेको र मोबाइल इन्टरनेट सेवा शुल्क अन्य मुलुकभन्दा बढी भए पनि कम गर्दै लैजाने बताउनुभएको छ । विनियोजन..
टेलिफोन वार्ताको आवाज अभिलेख राख्ने प्रविधि छैन : टेलिकम ११ असार २०७५, सोमबार २१:०५
काठमाडौँ, ११ असार । ल्याण्डलाइन टेलिफोन र मोबाइलमा भएको कुराकानीको आवाज अभिलेख राख्ने (रेकर्ड गर्ने) प्रविधि नरहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीले ग्राहकले कुन नम्बरमा फोन गरेर कति मिनेट कुराकानी गरे भन्ने..